Gawaarida boorsooyinka oo laaban
Baabuur Gacmeed Culus
Samee sida ugu fiican 2021
2021 waa sanad adag oo dhab ah. Saamaynta COVID-19 ee dalal kala duwan ayaa sii socota, iibinta warshadaha kala duwanna way sii yaraanaysaa. Waxaa saameeyay sicir bararka caalamiga ah, birta alaabta ceeriin waxay kor u kacday in ka badan 40% halka aluminiumna ay ku dhowaad 50%. Qiimaha agabyada kale ee kaabayaasha ah, sida kartoonada, cajaladaha ...
Xilligii Gawaarida Dukaamaysiga Casriga ah
Iyada oo la horumarinayo farsamada sirdoonka macmalka ah iyo isbeddelada cusub ee warshadaha tafaariiqda, shirkado badan ayaa bilaabay inay horumariyaan ama isticmaalaan gawaarida wax iibsiga ee caqliga badan. In kasta oo gaadhiga wax iibsiga ee caqliga badani uu leeyahay faa'iidooyin badan oo codsi, haddana wuxuu u baahan yahay inuu fiiro gaar ah u yeesho arrimaha gaarka ah iyo arrimaha kale. ...
Gawaarida Dukaameysiga Ujeeddo Badan, Waad U Qalmaysaa
Gawaarida wax iibsiga ee ujeedooyin badan leh, awood weyn, labaduba way fadhiisan karaan oo isku laaban karaan, oo ay si qoto dheer u jecel yihiin macaamiisha! Iyada oo la hagaajinayo heerarka nolosha, shuruudaha dadka ee tayada nolosha ayaa sidoo kale sii kordhaya oo sare, taas oo sidoo kale si weyn p ...
Sida Loo Adeegsado Basket Shopping Iyo Cart Shopping Si Sax Ah
Horumarka bulshada, nolosheenna ayaa aad iyo aad ugu habboon. Haddii aad rabto inaad soo iibsato khudaar, miro, saabuun dhaqid iyo waxyaabaha kale ee daruuriga ah ee maalinlaha ah, waxaad ku xallin kartaa dhammaan dhibaatooyinka adigoo aaday dukaanka weyn Laakiin ma ogtahay? Supermarket-ka ayaa runtii ah il aad u weyn oo bakteeriya ah ...
5F-50497, Gate 75 District 4, Yiwu Market International Trade, Zhejiang, China 322000
Right Xuquuqda daabacaadda - 2019-2020: Dhammaan Reserved Rights. Alaabta La Soo Bandhigay - Tags kulul - Khariidadda bogga.xml - AMP Mobile